मेरो प्यारो मान्छे विकाससँग चिकेको वास्तविकतामा आधारित कथा
मेरो नाम उपनाम सुजाता हो । म यस वेव ब्लग मिराकल टिनमा चिकामारीको कथा पढ्ने र मिराकल टिनको ट्विटरमा पोर्न भिडियो हेर्ने नियमित पाठक हुँ । धेेरैको कथा पढ्दा पढ्दै आफ्नो कथा पनि छापाउन मन लाग्यो ।एउटै गाउँ भएपनि विकाशको र मेरो घर अलि टाढै पर्थ्यो । निक्कै दिन भएको थियो हाम्रो भेट नभएको । विकाशले मलाई प्रेम गर्छ भन्ने थाहा पाएदेखि मेरो भुईँमा खुट्टानै थिएन । मन पनि सिमलको फूल जस्तो भएको थियो । त्यसै नाचुँ नाचुँ जस्तो लाग्थ्यो । विकाशलाई भेट्न जान मन लागिरहेको थियो त्यसैले धेरै अगाडी देखि म संग रहेको विकाशको कापी पुर्याउन जाने बहाना बनाएर जाने विचार गरें र ऐना अगाडी बसेर सिँगारिन थालें । मलाई सिँगार गर्नै पर्ने त थिएन तर पनि आफ्नो मनपर्ने मान्छेसंग जाँदा अलि राम्री हुन मन लागेको थियो । अनुहारको सिँगार पटार सकेर म ऐनामा हेर्दै आफ्नो स्तन खेलाउन थालिसकेछु । म किन यस्ती बहुलाई भएकि ? आफैं छक्क पर्छु ।
सायद मेरो प्रकृती नै यस्तो हो कि ? अलिकती फुर्सद पाएँँ भने म किन यौनाङ्गहरु खेलाउँँछु ? विकाशले भनेझैँँ म उम्लिएर पोखिन बेर छैन । विकाशको कुराको सम्झनाले सम्हालिएर म उसको घर गएँँ । सुनसान थियो घर । सायद कोहि थिएनन । म फर्कन लाग्दै गर्दा विकाशको दिदीले बोलाउनु भयो, "अरे सानी ? किन आकिथ्यौ, फेरी फर्कन लाग्यौ त ?"
"नमस्ते कुसुम दिदी, नमस्ते गर्दै म बोलें, ‘म त कसैलाई नदेखेर जान आँटेकी । यो विकाशको कापी दिनुथ्यो । विकाश कहाँ छन् नि ?
‘ए, विकाश र बाबा त हिजो पुने जानु भयो त । हाम्रो विकाशलाई पुनेमा पढाउने अरे । साँच्चि तिमी कहाँ पढ्ने ?’ नमस्ते फर्काउदै कुसुम दिदीले सोध्नुभयो । हाम्रो प्लसको पढाई सकिएको थियो । भर्खरै परिक्षाफल निस्किएर अब अगाडी कहाँ पढ्ने भन्ने कुरा हुँँदै थियो ।
"खै दिदी, बुबाले त काठ्माण्डौ पठाउँँछु भन्नु भएको थियो । उतै पढ्छु होला आन्टीकोमा बसेर" - मैले भनेँँ । अनि दिदी 'मसंग त बिकाशले काठ्माण्डौ नै पढ्ने भन्थे त ।'
"भन्छ नि त्यसले, बाबाले त्यसलाई पुनेबाट एम बि ए गराउने भन्नुहुँँदैछ । बि एम सि सि मै पढ्छ होला त्यो पनि । त्यही ब्रेहान महाराष्ट्र कलेज अफ कमर्समा कुसुम दिदीले पनि पढ्नु भएको थियो । अहिले बिहे भई सकेर साउने पानी छल्न आउनुभएको थियो दिदी । नाम अनुशार नै राम्री हुनुहुन्थ्यो कुसुम दिदी । सानोमा हामीलाइ ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो । कतिपल्ट विकाश र मलाई लोग्ने स्वास्नी भई खेल्दै गर्दा रंगेहात पक्रनु भएको पनि थियो । पछिसम्म पनि मलाई भेट्दा के छ बुहारी भनेर जिस्काई रहनुहुन्थ्यो त्यसैले म कुसुम दिदीको नजिक त्यती पर्दिनँँथेँँ । कुसुम दिदी अझै के के भन्नु हुँँदैथियो तर यता मेरो मनमा भने चट्याङ्ग परिसकेको थियो । काठमाण्डौमा पढ्न गएपछि स्वतन्त्र भएर विकाशसँँग घुम्न पाउने कल्पनामा डुब्न थालिसकेकि मलाई दिदीको खबरले मर्माहत बनायो । म टोलाएको देखेर होला दिदीले के भयो सानी, किन टोलाएकि भन्नुहुँँदै थियो । म केहि हैन दिदी भन्दै बिदा भएर घर फर्कें ।
मलाई विकाशसंग बेस्करी रिस उठेको थियो । आवोस न अनि जानेकि छु भन्दै म मुर्मुरिरहेकि थिएँँ तर विकाश पुनेबाट फर्किनु अगाडी नै मलाई पनि काठमाण्डौ जानुपर्यो । म पनि बुबासंग काठमाण्डौ गएँँ । मैतीदेवीको यौटा गल्लीभित्र आण्टीको घर थियो । म पहिले आउँँदा आण्टीहरु महाराजगंजतिर बस्नुहुन्थ्यो । मलाई यो काठमाण्डौ पहिले पनि मन नपरेको यो पाली पनि मन परेन । कसरी यस्तो ठाउँमा बसेर पढ्नु होला ? कि पछि बस्दै गएपछि राम्रो लाग्छ कि ? मैले पढ्ने कलेज चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा थियो । कलेज शुरु भएपछि हरेक बिहान मैतीदेवी मन्दिर अगाडीबाट कलेजको बसमा जानुपर्थ्यो ।
सबैकुराको निधो भएर भोलिपल्ट बिहान हामी घर फर्किने भएका थियौ । अघिल्लो साँझ म मौका छोपेर एक्लै घुम्न निस्केँँ । मलाई केहि कण्डोम किन्नु थियो । हुन त विकाशले अबको भेटमा म कण्डोम लिएर आउँँछु भनेको थियो तर म भन्दा सोझो छ विकाश । नल्याएर पछि मलाई त किन्न लाज लाग्यो सानी भन्न सक्छ । मैले पनि किनिँँन र उसले पनि ल्याएन भने उ संगको मेरो संभोगको ईच्छा अर्को भेटमा पनि तुहिएर जान सक्छ ।
साँझको बेला जुन पसलमा पनि मानिसहरुको धुईरो थियो । धेरै मानिसहरु भएको पसलमा गएर कण्डोम माग्न मलाई कता कता कुरि कुरि लाग्दै थियो तर मेरो लागि ग्राहकको घुँईचो नभएको पसल कहाँ हुन्थ्यो र ? जे परोस्, म नकिनि नछाड्ने अठोटमा पुगें र अलि सुनसान देखिने यौटा पसलमा छिरें । पसले अलि उमेर ढल्केको काठमाण्डौकै रैथाने जस्तो देखिन्थ्यो । बाहिर पट्टी बेञ्चमा यौटा युवक चुरोटको मज्जा लुट्दै थियो । सायद पसले र त्यो युवक बात मार्दै थिए ।
‘साउजी, मलाई एक प्याकेट कण्डोम दिनुहोस न प्लीज ।' मैले पसलेतिर मुखरित भएर भनें । रेडियो ट्युनिङ्ग गर्दै पसले कुनै समाचार खोज्दै थियो वा एफ एममा गीत खोज्दैथियो ,।झस्किएर अलि ठुला ठुला आँखा बनाएर म तिर हेरेर बोल्यो । "हजुर के भन्नु भो टपाईंले ?" उसको अनुहारको भावले प्रष्ट पार्थ्यो कि उ अचम्ममा परेको छ अनि मलाई जिस्काउने दाउमा पनि । ‘मैले भने - मलाई एक प्याकेट कण्डोम दिनुस् न ।'
‘ए हव्स्, उसले बनावटी नम्रताको साथ भन्यो - "तर टपाईं ट बे भको जस्टो डेखिडैन । हेर्डा अझै कुमारी डेखिन्छ ।'
पसलेको कुराले मेरो रिसको पारो एकैचोटी माथि चढ्यो । म अलि कडा भएर बोलें - ‘हेर्नुस साउजी, तपाईं मतलब भन्दा बाहिर जानुहुँँदैछ । म कुमारी हुँ या बिवाहिता हुँ या बिधवा हुँ त्यो संग तपाईलाई के को टाउको दुखाई ? तपाईँ पसल थापेर बस्नु भएको छ र पसलमा कण्डोम पनि बेचिन्छ भनेर यत्रो बोर्डपनि राख्नु भएको छ । जब बेच्न तपाईं बस्नु भएको छ भने ग्राहकहरु किन्न आउंदा फेरी के को आपत्ती ? ग्राहकहरु कुमारी हुन कि बिवाहिता हुन कि बुढि हुन; बेच्नेले रिपोर्ट त राख्नु पर्दैन होला नि ? ‘पसले कण्डोमको प्याकेट तिर लम्कंदै थियो । बेञ्चमा बसेको युवक राम्रै चित्त बुझेझैं गरेर हाँस्यो र भन्यो - ‘सहि कुरा हो । तपाईंलाई के आपत्ती नि साउजी, जस्लाई जे आवस्यकता हुन्छ उसले त्यहि किन्छ । ‘चिन्नु न जान्नु घचेटीमाग्नु । उसको कुरालाई बिचैमा काटेर म उ तर्फ लक्ष्य गर्दै बोलें, - ‘धन्यवाद महाशय । तर तपाईं चुरोटकै मज्जा लिंदै गर्नुहोस । हाम्रो बिचमा तपाईंको आवश्यकता छैन । ‘उ चुप लाग्यो तर यता साउजीको घैंटोमा घाम लागेझैं पसल थर्काउंदै कुनै रेडियो नाटकमा राक्षस हाँसे झैं हांस्न थाल्यो ।
एकैछिन त मलाई त्यहाँ हाँसोको पात्र बन्दैछु कि जस्तो पनि लाग्यो । मलाई त्यहाँबाट कन्डोम लिएर छिट्टो उम्कन पाए हुन्थ्यो जस्तो भएर पसलेलाई अलि छिट्टो गर्न भनें । पसलेले कन्डोमको प्याकेट म तर्फ बढाउदै भन्यो, ‘ल लिनुहोस बैनी, मैले ट टपाईँलाई नराम्रो भन्न खोजेको ठिंन टर टपाईँ ट टेसै रिसाउनु भो टर आजसम्म मेरो पसलमा केटी आर कण्डोम किनेको मलाई ठा ठेन टेई भर हो ।'
पैसा तिरेर मैले कण्डोमको प्याकेट आफ्नो ह्याण्ड ब्यागमा राख्दै भनें, - ‘धन्यवाद ! आज देख्नु भयो नि हैन ? धन्दा नमान्नुस मैले कण्डोम किनें भनेर कसैले तपाईंको पसल अगाडी टायर बाल्दैन न तपाईंले केटीलाई कण्डोम बेच्नु भयो भनेर कसैले तपाईंको पसल बन्द गर्छन ।' म पसलबाट निस्किएँँ । बाहिर बसेको युवक नसकिने भयो आजभोलीका केटीहरुलाई भन्दैथियो । म सुनेको नसुन्यै हिँँडिदिएँँ । उनिहरुले सायद मेरो निक्कै कुरा काटे होलान । काटे के त ? म आफुलाई चाहिने जे सुकै कुरा किन्न सक्छु नि । किन मान्छेहरु जाबो कण्डोम पनि केटीले किन्दा चाँही गैह्र कानुनी काम भए जत्तिकै गर्छन ? यस्तै सोच्दै म आण्टीको घर पुगें ।
भोलीपल्ट बिहान सबेरै हामी फर्कियौं । साँझतिर घर आईपुग्दा मलाई साह्रै खुशी लाग्यो । मलाई आफ्नो गाउँ भन्दा प्यारो अरु कुनै ठाउँ पनि लाग्दैन । सबैलाई त्यस्तै हुँदो हो । केहि दिनको लागी म कतै गएँँ भने कहिले आफ्नो घरगाउँ फर्कनु जस्तो लाग्छ मलाई । प्रत्येक साँझ घाम अस्ताउँँदा र प्रत्येक बिहान घाम झुल्किँँदा मलाई आफ्नै घरगाउँमा हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अझ त्यसमाथी यो पल्ट विकाश संगको भेटमा हुने आनन्ददायी यौनकृडाको कल्पनाले मलाई त्यसै त्यसै पुलकित बनाएको थियो ।
भन्नलाई त मान्छेहरु अजिँगरको आहारा दैबले जुराउँँछ भन्ने गर्छन तर विचरा अजिँगर आहारा नपाएर महिनौं सम्म भोकै पनि बस्दो हो नि; भन्नेहरुलाई के थाहा ? त्यस्तै विकाश र मेरो भेट हुने दिन पनि जुर्न आँटेको थिएन । पढ्नलाई विकाशको पुने जाने दिन र मेरो काठमाण्डौ जाने दिन नजिकिँँदै थियो । म भित्र भने अति नै छट्पटी भैई रहेको थियो । म आफुले किनेर ल्याएको कण्डोमको प्याकेट कैले यो ब्यागमा कैले त्यो झोलामा लुकाउथें । हुन त मेरो कोठामा पसेर छापछाप्ती गर्ने कोहि थिएनन तर पनि कसैले भेटीहाल्ला कि भन्ने जस्तो हुन्थ्यो । दिउँँसो भने म त्यसलाई कुनै उपायले साथमै राख्थें । कतै विकाशसंग भेट भएर त्यसको सदुपयोग गर्ने अवशर मिलिहाल्छ कि भन्ने आशा मनमा हुन्थ्यो ।
एकदिन त्यसरी नै छट्पटीदै म कोठामै बसिरहेकि थिएँँ । बुबा सधैझैं आजपनि बिहानै अफिस जानु भएको साँझमा मात्रै फर्कनु हुन्थ्यो । आमा पनि आज किनमेल गर्न बजार जानु भएको थियो । फर्कन आमालाई पनि निक्कै समय लाग्थ्यो । भाई साथीहरुसंग मिलेर गुलेली खेल्न कुन मुलुक पुगेको होला । छुट्टी छ आजभोली त्यसको स्कूल पनि त्यसैले खेल्नमा मस्त हुन्छ दिनभर साँझ गाँस टिप्न आईपुग्छ । म घरमा एक्लै थिएँँ । ब्यागबाट कण्डोमको प्याकेट निकालेर हेर्दै मनमनै बेकारै हुनेभयो भन्दैथिएँँ । एक्कासी तलबाट विकाशले बोलाएको जस्तै लाग्यो । लाग्यो भ्रम होला, विकाशको बारेमा धेरै सोचेर मलाई प्राय यस्तै भ्रम हुन्छ । फेरी विकाशकै आवाजले मलाई बोलाएको सुनें । झ्यालबाट तल चिहाएर हेर्दा विकास आँगनबाट मेरै झ्याल तिर हेर्दै थियो ।
मेरो खुशीको सिमा रहेन । विकाशलाई माथी बोलाएँँ । उ कोठाभित्र छिर्नासाथ म उसलाई अंगाल्न पुगें । विकाशसंग मलाई उठेको रिस मरिसकेको थियो तर उ पो म संग रिसाएको रहेछ । ‘सानी तिमीले यो के लेखेको ? कति सम्झाउँँदा पनि नमान्ने तिमी त । ‘उसले यौटा कागजको टुक्रामा मैले उसैलाई लेखेको प्रेमको चिठ्ठी देखाउँँदै भन्यो । ‘दिदीले सबै हेर्नुभएछ । मलाई त दिदीले पो दिनु भएको । धन्न घरमा कसैलाई भनिदिनु भएन ।‘
त्यो चिठ्ठी मैले विकाशको कापीमा लेखेको थिएँँ र विकाशलाई पुर्याउन गएको दिन कुसुम दिदीलाई छोडेर आएको थिएँँ । त्यतीबेला मलाई त्यो कापीभित्र चिठ्ठी लेखेको छु भन्ने होस नै भएनछ । विकाशलाई अंगालोमा कस्दै मैले भनें - ‘तिम्री दिदीले मलाई बुहारी भन्न हुन्छ भने मैले वहाँको भाईलाई चिठ्ठी लेख्न हुँँदैन ?'
विकाशले मलाई अंगालो हालेर उचाल्दै मेरो पलङ्गमा बसायो । उसको नजर टेबलमा मैले राखेको कण्डोममा परेछ । के के न भए जस्तै गरेर भन्यो, अरे यो काँ बाट आयो ?'
‘मैले किनेर ल्याएकि नि, तिमी किन्छौ कि किन्दैनौ भनेर ।' उसले तुरुन्तै आफ्नो खल्तीबाट कण्डोम निकाल्दै भन्यो, ल्याको थें नि मैले पनि ।' उसले जिन्सको पाइन्ट लगाएको थियो । त्यसैमाथीबाट उसको लिंग सुम्सुम्याउंदै मैले भनें - 'आज काम लगाउनुपर्छ यसलाई । ‘
वयस्क भईसकेपछिको यो हाम्रो दोश्रो मिलन थियो । पहिलो मिलनमा भन्दा आज अलि बढि अनुभवी भएझैं देखिन्थ्यो विकाश । आज मैले कुर्ता सलवार लगाएकि थिएँँ । कुर्ता माथिबाटै मेरा कसिएका दुई स्तन खेलाउदै हुन्छ भन्यो र मेरो गर्दन तिर चुम्न थाल्यो । त्यहाँँ त्यतीबेला कोहि आउलान भन्ने मलाई डर चिन्ता थिएन । मैले तलबाट माथितिर सोहोरेर कुर्ता फुकालें । महिनौंसम्म कारावासको सजाय भोगेर उन्मुक्ती पाएझैं मेरा दुई स्तनहरु आजाद भए तर लगत्तै फरार कैदी प्रहरीको गिरफ्तारीमा परेझैं दुबै स्तनहरु विकाशको पञ्जामा गिरफ्त भए ।
म विकाशको पाईण्ट खोल्ने उपक्रममा थिएँँ । बटनहरु मैले खोलिसकेपछि विकाशले आफैं पाइन्ट । उसको टाईट पाइन्ट अण्डर वेयर पनि निस्किएर जाँदा विकाशको लिँग रिसाएको गोबन सर्प फणा फुलाएर दुलोबाट निस्किएझैं मलाई झस्काउँँदै म तिर तेर्सियो ।
उसको गतिलो लिँग देख्नासाथ ममा चुस्ने ईच्छा भएर होला मेरो जिब्रोको फेदतिरका सम्पुर्ण र्‍याल ग्रन्थीहरु रसाएर मुखभरी पानी भरिएर आयो तर आजको हाम्रो अभिष्ट त्यो थिएन त्यसैले उसको लिँगलाई हातले मुसारेर उसलाई पलङ्गमा तानें र भनें - ‘विकाश म कण्डोम लगाईदिन्छु ल ।'
विकाश मेरो सलवारको ईँजार खुस्काउंदै थियो र बोल्यो, ‘हैन म आफैं लगाउँँछु । उसले मेरो चिप्लो कपडाको सलवार खुट्टातिरबाट तानेर फुकालिदियो र पेण्टीमाथीबाटै केहि माथी उठेको मेरो योनिलाई सिँगो समोसा टोक्नखोजे जस्तै गरेर बिस्तारै टोक्यो र चुम्दै भन्यो, ‘सानी आज किन तिम्रो भुत्ला घोच्ने भएको ?’
मैले भर्खरै कैंची लगाएर योनि क्षेत्रका रौंहरु हल्का छाँटेकि थिएँँ त्यसैले अलि दह्रो भएर होला मेरा रौंहरु पेण्टी छेडेर बाहिर निस्किन खोज्दै गरे जस्ता देखिन्थे । मैले छाँटेकि थिएंँ नि त । साह्रो घोच्यो र ? - मैले सोधें ।
‘हैन अलि बिझाउने भएछ ।' विकाशले मेरो पेण्टी तल सोहोर्दै भन्यो । म सर्बाङ्ग नाङ्गी भएकि थिएँँ । यौनकृडामा हामी दुई न त अनभिज्ञ थियौं न त पारंगत । प्रकृतीले नै सिकाउने यस्तो कलामा भन्नु पर्दा हामी दुबै शिकारु थियौं । मैले विकाशलाई उसको टी शर्ट फुकाल्न भनें । ज्ञानी बालकलेझैं उसले आफ्नो टी शर्ट खोल्यो र फेरी मेरो योनिमै मुख गाड्न थाल्यो । उ आफ्ना दुई ओठहरुले च्यापेर ढाडीएको किसमिस जस्तो मेरो भगशिश्न चुस्तै थियो । म उन्मादले छट्पटीन थालें । मेरो मुखबाट उन्मादका उदगारहरु निस्किन थाले । म मा सकेसम्म छिट्टो रतीराग अलाप्ने धून सवार थियो त्यसैले विकाशलाई छिट्टो गर्न भनें । विकाशले कण्डोम झिकेर आफ्नो लिँगमा लगायो र म माथी चढ्न आयो । मैले उसलाई सजिलो पार्ने हेतुले तिघ्रा फारेर उत्तानो सुतेको अवस्थामै केहि चटपटाएर आफ्नो शरिर मिलाएँँ । त्यसै त उत्तेजनाले पानी पानी भएको मेरो योनि त्यसमाथी विकाशको लिँगमा चिप्लो तरल पदार्थ सहितको कण्डोम, मलाई एकै झट्कामा विकाशको लिँग मेरो योनिभित्र फेदैसम्म छिर्छ जस्तो लागेको थियो तर कहाँ त्यस्तो हुँँदो रहेछ र ? क्रमैसंग अलि अलि गर्दै विकाशको लिँग मेरो योनिभित्र छिर्दै थियो । उसको लिँग मेरो योनिभित्र पसिरहँदा मलाई केहि पिँडाको महसुस भैरहेको भए पनि त्यो पिँडा मिठासपुर्ण थियो ।
विकाश मेरो शरिरमा लपक्कै टाँसीएर मच्चिईरहेको थियो । मुखमा मुख जोडेर हामी एक अर्काको जिब्रोको स्वाद पनि लिँदै थियौं । केहिबेरको परिश्रमपछि विकाश स्खलित भएछ । उ सायद उसैले सोचेको भन्दा छिट्टो स्खलित भएछ क्यार असन्तुष्टी पुर्ण स्वरमा बोल्यो, ‘ला सानी मेरो त झर्न थाल्यो ।‘ यता मेरो भने तिर्खा अझै बाँकी थियो । मलाई विकाशले अझै निक्कै बेर मेरो पलङ्गको डसनामै भासिने गरेर माथिबाट तल मच्चिएर थिचिरहे हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैथियो । विकाशले उसको लिँग मेरो योनिबाट झिक्यो । उसको लिँगमा भएको कण्डोम विर्यको तापले पग्लिएर टुप्पोमा स-सानो कचौरीमा भरी हुने जति विर्य सहित लिँग देखि तल झुण्डिएको अवस्थामा थियो ।
‘ए ! त्यो त भएनछ नि । तिमीले लगाउन जानेनौ कि क्या हो ?’ मैले भनें । ‘खै होला, मैले लगाउनै नजानेर हो कि यो लगाएर मज्जा नै आएन । होसियारी पुर्बक आफ्नो लिँगबाट कन्डोम झिक्दै विकाश बोल्यो - 'कहाँ फाल्ने यसलाई ? उसको लिँगमा भएको कडापनमा अलि ह्रास आएझैं थोरै लत्रीएको देखिन्थ्यो । 'त्यहिँ राखन म भरै फाल्छु ।' मैले भनें ।
विकाशले यौटा प्लास्टिकको थैलामा प्रयोगमा आईसकेको कण्डोम राख्यो । मैले उसलाई फेरी पलङ्गमा तानें र भनें ‘विकाश मलाई त भकै छैन फेरी गरौं न । उ अलि असमञ्जसमा परेझैं देखियो । मैले उसमा उत्तेजना भर्ने हिसाबले एकहातले उसको लिँग खेलाउँँदै जताततै उसलाई चुम्न थालें । उसको पनि संभोगको ईच्छा पुर्ती भैसकेको थिएन होला उ पनि मेरा दुबै स्तनका मुण्टोहरु पालै पालो चुस्न थाल्यो । हामीबिच एक प्रकारले चुस्ने प्रतिस्पर्धा भयो । यहि क्रममा विकाश मेरो योनि मै पुगेको थियो । मैले पहिले देखिनै नोटिस गरेकि थिएँँ विकाश मेरो योनि चुस्न निक्कै सिपालु छ अनि निक्कै मन गर्छ पनि । म पनि उसको लिँग चुस्न थालें । केहि बेरमा मैले आफ्नो मुखभित्र उसको लिँगमा कडापन आएको महसुस गर्दैथिएँँ । एक्कासी उसले आफ्नो मुख मेरो योनिबाट हटायो र मलाई पल्टाएर घोप्टो फर्कायो । उसले दुबै हातले मेरो कम्मरमा कस्सेर समात्दै मेरो कम्मर मुनिको भागलाई केहि उचालेर मेरो योनिमा पुन लिँग पसाउन थाल्यो । म स्वत उसलाई सजिलो हुने आसनमा बसें । मेरो छाती देखि माथी टाउकोसम्म डसनामा जोतिएको थियो भने तलतिर तिघ्रा अलि फारिएको अवस्थामा घुँडा टेकेकि थिएँँ । फेरि नयाँ जोसको साथ विकाश मलाई धकेल्दै थियो । अहिले मलाई अझै धेरै पिँडा भैरहे पनि म त्यो सब सहन तयार थिएँँ । विकाशले यो पल्ट कन्डोम लगाएको थिएन । मैले उसलाई सोधें - विकाश अर्को कण्डोम किन नलगाएको ? म आमा भएँँ भनें ? विकाश मलाई अझै जोडले धकेल्दै बोल्यो, 'भयौ भने म बाउ हुन्छु ।' मलाई संयमित हुन सिकाउने विकाश संभोगको दौरान आफैं बहकिएको थियो । प्रेममा मान्छे अन्धो हुन्छ भनेको यस्तै होला सायद । अहिले भने विकाशको लिँग फेदै सम्म मेरो योनिभित्र पसेकोझैं लाग्दैथियो मलाई । म मेरो योनिको गालाहरुमा उसको दुई सुपारीका दानाहरु महसुस गर्दैथिएँँ । संभोगको चरम सुख भोग्दै थियौ हामी । यो पल्ट हामीदुबैको स्खलन हुने समय पनि एकै चोटी परेछ । गाईको बाच्छाले माउको थुन चुस्ता मुखको दुई कुनाबाट गजगजी फिँज काढेझैं बिकाशको लिँगले मेरो योनिमा घर्षण हुँदा मेरो योनिको कापहरुबाट पनि हामी दुबैको विर्यको फिँज गजगजी आएको थियो ।
अन्तत हामी दुबैको जोस सेलाउंदै गएर मच्चिने क्रम रोकियो । हामीलाई एक अर्काको अँगालोबाट कहिल्यै नछुटिनु परे हुन्थ्यो जस्तै भै रहेको थियो । केहि बेर पछि म उठेर कपडा लगाएर तल झरें । आँगनको छेउमा ट्युवेलको नजिक थियो हाम्रो बाथरूम । त्यहाँ पसेर छिट्छिटो नुहाएर म कोठामा आएँँ । विकाश आफ्नो कपडा लगाएर हाम्रो चर्तिकलाले खज्मजिएको पलङ्गको कपडा मिलाईबरी पलङ्गमै लडिरहेको थियो । म कोठामा पस्ने बित्तिकै मलाई फेरी पलङ्गमै तानेर मेरो ओठ चुस्न थाल्यो । मैले पनि केहि बेर उसलाई साथ दिएर चिया बनाउने बहानामा तल झरें । पछि पछि आउँँदै गरेको विकाश बोल्यो, ‘सानी अब कहिले हामी यसरी भेट हुने होला ?' उसको अनुहारमा हामी बिछोडिनु पर्ने पिँडाका भाव रेखाहरु थिए । उ पढ्नलाई पुने जाँदैथियो म काठमाण्डौ । हाम्रो भेट हुने संभावना नै थिएन । मैले अलि रिसाएको अभिनय गर्दै भनें - ‘काठमाण्डौ पढ्न जान्छु भनेर पुनेतिर एडमिशन गर्नुपर्छ अनि भेट भै हाल्छ नि ।' याचना मिश्रित स्वरमा विकाशले भन्यो ‘म के गरौ त सानी, मैले त काठमाण्डौ नै पढ्छु भनेको नि, बाबाले मान्नु भएन ।'
‘पुने गएर मलाई नबिर्सिनु नि फेरि । फोनमा, च्याटमा अनि ईमेलमा कुरा गर्नु पर्छ' मैले उसलाई सम्झाएँँ । ‘हुन्छ तर म त तिमी बिना पागल हुन्छु होला सानी ।'
‘तिमी मात्रै पागल हुने हो र ? म पनि पागल हुन्छु होला नि तर कुरा गरिरहनु पर्छ नि त्यस्तो हुँदैन ।' - मैले सम्झाएँँ । उसले अब एकदुई दिनभित्र मौका मिलेन भने यो अन्तिम किस है भन्दै मलाई गहिरो चुम्बन गर्यो । मैले चिया पिएर जाउ भन्दै गर्दा नमानेर भारी मन सहित उ घर फर्कियो । म चिया बनाउन भान्सामा छिरें – मन त मेरो पनि भारी नै थियो । यसरी आज हामी छुट्टिएको चार महिना भयो । विकाश दुई चार दिनमा मलाई भेेट्न आउँदै छ । त्यसपछि हाम्रो कामलिलाको अवस्य नै हुनेछ । सम्भव भए लाइभ भिडियो अथवा कथाको रुपमै बेलिबिस्तार लगाउने छु । पढ्नको लागि यस साइटमा आउँदै गर्नुहोला । धन्यबाद !
मेरो प्यारो मान्छे विकाससँग चिकेको वास्तविकतामा आधारित कथा 2016-11-03T17:42:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Bikas Gurung
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: मेरो प्यारो मान्छे विकाससँग चिकेको वास्तविकतामा आधारित कथा